यी श्रीमान जसले कोरोना देखिएकी श्रीमतीलाई एकछिन छाडेनन्, जोखिम मोलेरै श्रीमतीसँगै बसे ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/यी श्रीमान जसले कोरोना देखिएकी श्रीमतीलाई एकछिन छाडेनन्, जोखिम मोलेरै श्रीमतीसँगै बसे !
कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि पौडेलकी श्रीमतीलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो। पाँच महिनाको गर्भ भएको समयमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि पौडेल दम्पति देखि आत्तियो। श्रीमतीलाई कोरोनाको पुष्टि भएपनि पौडेलले श्रीमतीको साथ भने छाडेनन्, सँगै बसे। स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै बस्न आग्रह गरेपनि पनि उनले जोखिम मोलेरै श्रीमतीसँगै बसे।
आईसोलेसनमा रहँदा उनले श्रीमतीको आत्मबल दह्रो बनाउन सहयोग गरे। कोरोना पोजेटिभ देखिँदा पनि श्रीमानको साथ पाउँदा उनले पाँच दिनमै कोरोना पराजित गरीन्।
शुक्रबार र शनिबार कोरोना परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएपछि आइतबार उनलाई डिस्चार्ज गरियो। पाँच दिन सँगै आसोलेसनमा बसेर पौडेल दम्पत्ति आइतबार घर फर्कियो।“कोरोना सङ्क्रमण हुनु भनेको सामान्य रुघाखोकी लाग्नु हो आत्मबल बलियो बनाउनुस् निको हुन्छ ।”,उनले भनिन्।
आफूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको भान नभएको बताउँदै उनले सङ्क्रमणसमेत कसरी भयो भन्ने विषयनै अन्योल रहेको बताइन् । आफूहरु लकडाउनको समयमा र त्यसअघि पनि खासै कतै नगएको भए पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएर त्यसलाई जित्न सफल भएको उनको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमणले मान्छे मरिहाल्ने भन्ने नभएको उनको तर्क थियो । उनले भने“कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्ने भन्ने होइन । म गर्भवती हुँदा त तीन÷चार दिनमा नै जाती भएँ । तपाईँहरु पनि आत्तिनु पर्दैन, तातोपानी खाने र आत्मविश्वास बढाए सञ्चो भइन्छ ।”